macOS Catalina - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 2)
Apple wuxuu sii daayaa macOS Catalina 10.15.7 si uu uxaliyo 27-Inch iMac Graphics Issue
Cusboonaysiinta Safari 14.0 ee macOS Catalina
Apple waxay sii deyneysaa nooca 14.0 ee Safari ee macOS Catalina. Nooc cusub oo leh warar muhiim ah
Cusbooneysiin Dheeraad ah oo cusub oo loogu talagalay macOS 10.15.6
Laga soo bilaabo Apple waxay ka sii daayeen cusbooneysiin cusub oo dheeri ah macOS 10.15.6 oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ku saabsan isku xirnaanta iCloud Drive iyo Wi-Fi
Apple wuxuu sii daayaa Cusboonaysiin Dheeraad ah oo loogu talagalay macOS 10.15.6 si loo xaliyo arrimaha VMWare
Toddobaad ka dib markii la sii daayay macOS 10.15.6 Catalina, ragga ku jira VMware waxay ku dhawaaqeen in ka dib markay heleen ...
Jilicsanaanta macOS ee loo maro Xafiiska, laguna hagaajiyay noockeedii ugu dambeeyay ee macOS 10.15.3
Ka faa'iideysiga saameynaya macOS illaa Office ayaa horeyba loogu hagaajiyay nooca cusub ee barnaamijkan loogu talagalay macOS 10.15.3
MacBook-kaaga ayaa laga yaabaa inuu kuu sheego "Lacag la'aan" xitaa haddii aad ku rakibtay
MacBook-kaaga ayaa laga yaabaa inuu kuu sheego "Lacag la'aan" xitaa haddii aad ku rakibtay. Waa qayb ka mid ah maareynta batteriga cusub tan iyo macOS 10.15.5.
VMware waxay kugula talineysaa inaadan rakibin nooca ugu dambeeya ee macOS Catalina
Codsiga VMware wuxuu sababa xasilooni daro nidaamka kombiyuutarada oo dhan oo ay maamusho macOS 10.15.6 Catalina.
Apple wuxuu ku darayaa ogaanshaha "EvilQuest" macOS Catalina
Apple wuxuu ku darayaa ogaanshaha "EvilQuest" macOS Catalina. Hubi inaad haysato noocii ugu dambeeyay ee 2126 ee Xprotect ee ku saabsan Mac-gaaga.
macOS Catalina 10.15.6 waxay xallisaa dhibaatada isku xirka dekedda USB ee MacBook Pro iyo MacBook Air 2020
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee maanta la heli karo ee loogu talagalay macOS Catalina, ugu dambeyntii waxay xallineysaa dhibaatada isku xirnaanta qalabka USB 2.0 ee MacBook Air iyo Pro 2020
Apple wuxuu sii daayaa macOS Catalina 10.15.6, watchOS 6.2.8 iyo tvOS 13.4.8
Apple wuxuu sii daayaa macOS Catalina 10.15.6, watchOS 6.2.8, iyo tvOS 13.4.8. Cusbooneysiin ayaa hadda loo sii daayay dhammaan qalabka shirkadda.
Apple wuxuu sii daayaa betas saddexaad ee macOS Catalina 10.15.6, watchOS 6.2.8 iyo tvOS 13.4.8
Apple wuxuu sii daayaa betas saddexaad ee macOS Catalina 10.15.6, watchOS 6.2.8, iyo tvOS 13.4.8. Waxay noqon doonaan noocyadii ugu dambeeyay ka hor shirkadaha cusub ee sanadkan.
Xusuusnow in "Startup Disk" ay ku jirto Xulashada Nidaamka macOS Catalina
Xulashada Boot Disk waxay ku dhex jirtaa Nidaamka Xulashada markaa xusuusnow tan haddii aad isticmaali doontid macOS beta-ka disk ka baxsan
Beta labaad ee macOS Catalina 10.5.6 loogu talagalay horumariyeyaasha la sii daayay
Beta-ka labaad ee macOS Catalina 10.5.6 ayaa loo siidaayay horumariyeyaasha. Kaliya hagaaji cilladaha nooca ugu horreeya ee la sii daayay toddobaad ka hor.
Cusbooneysiintii shalay ee macOS Catalina 10.15.5 waa mid yar, laakiin waa muhiim
Cusbooneysiintii shalay ee macOS Catalina 10.15.5 waa mid yar, laakiin waa muhiim. waa balastar amni, sidaa darteed waa inaan cusbooneysiinnaa sida ugu dhakhsaha badan.
MacOS Catalina 10.15.5 Cusbooneysiin Dheeraad ah ayaa lasoo saaray
Apple waxay soo saartay nooc cusub oo ah macOS Catalina 10.15.5 oo loogu talagalay Mac. Tani waa cusbooneysiin dheeri ah waana in lagu rakibaa sida ugu dhakhsaha badan
Cilad ku jirta macOS 10.15.5 waxay ka hortageysaa sameynta keydad la kaydin karo
Nooca cusub ee macOS Catalina 10.15.5 wuxuu soo bandhigayaa qalad ku saabsan nidaamkiisa keydinta bilowga kaas oo sida muuqata horey ugu jiray betas.
Ku xakamee batterigaaga 'MacBook' macOS Catalina 10.15.5
Ku xakamee batterigaaga 'MacBook' macOS Catalina 10.15.5. Maareynta batteriga oo aad ugu eg middii laga hirgaliyay iPhone sanadkii hore.
Cusboonaysiinta rasmiga ah ee macOS Catalina 10.15.5 hadda waa la heli karaa
Apple waxay sii deyneysaa nooca cusub ee macOS Catalina 10.15.5 iyada oo leh sacab fiican oo hagaajin ah oo ku saabsan maareynta batteriga, FaceTime iyo inbadan
Apple wuxuu bilaabay Beta shanaad ee macOS Catalina 10.15.5
Beta-ka shanaad ee macOS Catalina 10.15.5 ee loogu talagalay horumariyeyaasha ayaa hadda loo heli karaa in la soo dejiyo. Hal talaabo oo dheeri ah oo ku aaddan nooca ugu dambeeya
Beta afaraad ee macOS Catalina 10.15.5 hadda waa la heli karaa
Beta beta afaraad ee waxa uu noqon doono nidaamka cusub ee hawlgalka ee kombiyuutarada Apple, macOS 10.15.5, ayaa hadda diyaar u ah soo dejinta
Daaqadaha FaceTime sabeynta ayaa lagu naafoobi karaa macOS
Daaqadaha ku soo dhawaada wicitaanada fiidiyowga ee 'FacTime' waa la hawl gelin karaa ama la xidhi karaa sida uu rabo isticmaalaha
macOS Catalina 10.15.5 Beta 3 ayaa la heli karaa
MacOS 3 Beta 10.15.5 ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo xarunta soo-saaraha ama OTA oo laga helo Mac-gaaga
Beta labaad ee macOS 10.15.5 oo leh warar xiiso leh
Beta labaad ee macOS 10.15.5 oo leh aalad maareyn batteri oo cusub taas oo ka dhigaysa mid wax ku ool ah oo waarta.
Apple wuxuu sii daayaa Cusboonaysiin Dheeraad ah oo ku saabsan macOS 10.15.4
Apple ayaa soo saartay cusbooneysiin amni oo dhameystiran si loo xaliyo dhibaatooyinka kala duwan ee cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macOS Catalina ay soo bandhigto
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha waxay leeyihiin shilal nidaam kadib markii loo casriyeeyay macOS Catalina 10.15.4
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay la kulmaan shilal nidaam kadib markay u cusbooneysiiyaan macOS Catalina 10.15.4. Apple horeyba way uga shaqeyneysaa waxayna u badan tahay inay si dhakhso leh ugu hagaajiso cusbooneysiinta nidaamka cusub ee hawlgalka.
Ku xiro Xbox One xakamayntaada Mac-gaaga si uu ugu ciyaaro Apple Arcade
Haddii aad haysatid Xbox One iyo Mac leh macOS Catalina, waxaan ku tusineynaa sida loo lamaaneeyo koontaroolaha kan koowaad iyo kan labaad. Ku raaxayso Apple Arcade.
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS Catalina 10.15.5 iyo tvOS 13.4.5 ayaa hadda la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS Catalina 10.15.5 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha, sidoo kale beta-ka tvOS 13.4.5, sidoo kale isla bulshadaas.
Sida loogu isticmaalo iPad-kaaga sidii shaashad labaad oo loogu talagalay Mac iyadoo la isticmaalayo Sidecar
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo isticmaalo Sidecar si loo helo kormeer labaad oo ku saabsan Mac-gaaga adigoo ku mahadsan iPad-kaaga, adigoon maalgelin hal euro ka badan gelin
Safari on macOS 10.15.4 wuxuu si otomaatig ah ugu daraa furayaasha ereyada 'iCloud' Chrome
Nooca cusub ee Safari wuxuu si otomaatig ah ugu daraa furayaasha ereyada 'iCloud' Chrome
Waxaa laga heli karaa macOS Catalina 10.15.4 oo wata warar xiiso leh
Waxaa laga heli karaa macOS Catalina 10.15.4 oo wata warar xiiso leh. La wadaag feylasha iCloud, karaoke, Screen Screen, Netflix oo leh HDR, iibsashada guud, iwm.
Beta 10.15.4th ee macOS Catalina 13.4, tvOS 6.2 iyo watchOS XNUMX
Apple waxay sii deysay beta-kii lixaad ee macOS Catalina 10.15.4, tvOS 13.4 iyo watchOS 6.2 oo ay heli karaan oo kaliya horumariyeyaasha
macOS 10.16 waxay hagaajin laheyd xulashooyinka barnaamijka farriimaha
Nooca soo socda ee macOS Catalina 10.16 ee Apple loo maleynayo inuu ku soo bandhigo WWDC 2020 wuxuu ku dari doonaa isbeddelo badan barnaamijka farriimaha
MacOS 5 iyo tvOS 10.15.4 Beta 13.4 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysaa noocyo beta cusub oo loogu talagalay horumariyeyaasha. Xaaladdan oo kale beta 5 nooca macOS Catalina iyo tvOS
Sida loo maqlo dhawaqa hore markale Mac
Sida loo maqlo dhawaqa hore markale Mac. Adiga oo ku jira Terminal waxaad mar labaad ka maqli kartaa jalaska caanka ah ee Apple.
macOS Catalina 10.15.4 beta 2 waxay ku daraysaa karaoke Apple Music
macOS Catalina 10.15.4 beta 2 waxay ku daraysaa karaoke Apple Music. Sida iPhones oo kale, Apple Music ayaa isku dhejin doonta heesaha muusikada Macs.
"Tilmaamaha Madaxa" waxaa laga helay beta-ka cusub ee Catalina: calaamaddu waxay raacaysaa indhahaaga
"Tilmaamaha Madaxa" waxaa laga helay beta-ka cusub ee Catalina: calaamaddu waxay raacaysaa indhahaaga. Ku xakamee dulqeelaha indhahaaga, adigoon taaban jiirka ama trackpad.
MacOS 1, watchOS 10.15.4, iyo tvOS 6.2 beta 13.4 oo loo sii daayay horumariyeyaasha
Noocyada beta fiidkii ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Apple wuxuu sii daayaa mid kasta oo ka mid ah noocyada beta ugu horreeya ee OS
Jilicsanaanta sudo ee ku jirta Macs horay ayaa loo hagaajiyay
U nuglaanta adeegga sudo ee u oggolaanaya isticmaale kasta inuu yeesho mudnaan ayaa la ogaaday oo la saxay Apple
macOS Catalina 10.15.3 Beta 3, waa la heli karaa
Apple waxay hadda u furtay soo dejinta kaliyana waxay u tahay horumariyeyaasha beta 3 ee macOS Catalina 10.15.3 oo aan wax war ah laga fileynin.
Ka samatabixi iTunes Store-ka miyuusigga macOS Catalina
Iyada oo macOS Catalina iTunes laga waayey Macs-keena, laakiin waxaad ugu badbaadin kartaa iTunes Store si fudud. Waxaan ku tusaynaa sida.
Macs waxay lahaan karaan qaab Pro iyada oo loo marayo softiweerka
Waxay u muuqataa in Apple ay rabto inay soo bandhigto qaab Pro ah oo ku jira barnaamijyadeeda 'Macs' Nooca badhanka turbo-ka kaas oo awood dheeri ah looga codsado mashiinka.
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS 10.15.3 iyo tvOS 13.3.1 ayaa hadda la heli karaa
Waxaan ku sii wadaynaa betasyada. Ragga ka socda Cupertino waxay hadda bilaabeen beta cusub dhammaan nidaamyada hawlgalka ee ay maareeyaan ...
Sida Loogu Keeno Hab Casri ah Webka Safari
Waxaan ku tusineynaa laba codsi oo ka dhigaya boggaga internetka ee aad booqato oo la socda Safari inay la jaan qaadi karaan Habaynta Habeenkii, sida nidaamka intiisa kale.
MacOS Catalina 10.15.2 hadda waa la heli karaa
Hadda waxaa laga soo dejisan karaa Mac-gaaga, nooca cusub ee 10.15.2 ee macOS Catalina oo leh warar xiiso leh.
MacOS Catalina beta 4 ee loogu talagalay horumariyeyaasha hadda la heli karo
Beta 4 ee macOS Catalina 10.15.2 hadda waa la heli karaa si loogu soo dejiyo oo kaliya loogu talagalay horumariyeyaasha leh hal sheeko oo ku dhex jira.
Sida loo dejiyo biraawsarka asalka ah ee aad rabto macOS
Sideen u qeexi karnaa biraawsarka aan rabno asal ahaan macOS. Hagaag maanta waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo qaab fudud
Maamul macOS kordhinta
Si fudud u maamusho kordhinta macOS Catalina ee Nidaamka Xulashada.
Beta-saddexaad ee macOS Catalina 10.15.2 hadda waa la heli karaa
Apple waxay soo saartay beta-kii saddexaad ee macOS Catalina 10.15.2 oo ay heli karaan horumariyeyaasha. Waxaad kala soo bixi kartaa sidii had iyo jeer adigoo raadinaya cusbooneysiintan
MacOS Catalina 2 beta 10.15.2 ayaa la siidaayay
Beta 2 ee macOS 10.15.2 hadda waa la heli karaa, kaas oo diiradda saaraya xallinta khaladaadka aan ku yareyn Catalina
Mac-keyga kuma xiridoono macOS Catalina
Miyaad dhibaato ku qabtaa daminta Mac-gaaga? Fursadahaani waxay xallin karaan dhibaatada nooca cusub ee macOS Catalina
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS Catalina 10.15.2 oo ku jira gacanta horumariyeyaasha
Waa iska caadi haddii aad ku aragto disk "Data" ah macOS Catalina.
Iyadoo la adeegsanayo macOS Catalina, Apple waxay soo saartay hab cusub oo lagu hubiyo xogta kombiyuutarka iyadoo la abuurayo disk labaad oo qarsoon oo loo yaqaan "data"
macOS Catalina 10.15.1 iyo watchOS 6.1 oo hadda loo heli karo qof walba
Nooca cusub ee macOS Catalina 10.15.1 iyo watchOS 6.1 ayaa hadda loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Kuwani waa dhammaan dhibaatooyinka ay soo saarto macOS Catalina
Ka hor intaadan rakibin macOS Catalina, akhri maqaalkan ka dibna tixgeli inaad horay u socoto iyo in kale. Waxaan kuu sharaxeynaa dhibaatooyinka ilaa hadda la ogaaday.
macOS sidoo kale waxay kugula socodsiineysaa cusbooneysiinta HomeKit ee Guriga
Cusboonaysiinta aaladaha HomeKit waxay ka muuqdaan Mac iyaga oo wata macOS Catalina oo aan hore u soo bixin.
macOS Catalina waxay ka dhigeysaa kombuyuutarrada qaar kuwo aan la isticmaali karin
MacOS Catalina waxay dhibaato ku haysaa adeegsadayaal aad u tiro yar taas oo ka dhigaysa Macs-kooda inay isu beddelaan warqad fiican oo la maro
Apple waxay sii deyneysaa macOS Catalina 10.15.1 beta 3 loogu talagalay horumariyeyaasha
Nooca cusub ee macOS Catalina wuxuu horeyba ugu jiraa gacanta horumariyeyaasha. Xaaladdan oo kale macOS 10.15.1 beta 3
Si fiican uga faa'iideyso hagaajinta Notes macOS Catalina
Codsiga asalka u ah macOS Catalina wuxuu ku darayaa sacab mug leh oo hawlo cusub ah oo hubaal ah inay faa'iido u leeyihiin maalinkasta.
MacOS Catalina 10.15 cusboonaysiinta amniga laakiin maahan qof walba
Apple waxay soo saartay nooc cusub oo loogu talagalay macOS Catalina kaas oo ay ku darayso dhib markii la rakibayo OS-kan cusub
Jooji soo diraha iyo dunta aamusnaanta ee macOS Catalina Mail
Shaqooyin dhowr ah oo cusub oo ku jira barnaamijka macOS ee Catalina, Mail.
MacOS Catalina beta labaad oo loogu talagalay horumariyeyaasha
Nooca beta-ka labaad ee macOS Catalina 10.15.1 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha. Noocani wuxuu hagaajiyaa cayayaanka wuxuuna hagaajiyaa xasilloonida.
Nooca cusub ee macOS Catalina oo leh cilado khalad ah
Nooc cusub oo ah macOS Catalina ayaa lagu sii daayay qaladaad cillad leh iyo xalalka dhibaatooyinka lagu arkay nidaamka
macOS Catalina sidoo kale waxay dhibaato ku qabtaa qaar ka mid ah eGPUs
macOS Catalina waxay sii wadaa inay dhibaatooyin u keento dadka isticmaala qaarkood. Qaar ka mid ah eGPU-yada ayaa la ogaaday inaysan si wanaagsan ula jaanqaadi karin nidaamka cusub ee hawlgalka
Barnaamijka Mail ayaa dhibaato ku qaba macOS Catalina
macOS Catalina waxay dhibaato ku keenaysaa codsiga Mail, ilaa heer aan kugula taliyo inaadan cusbooneysiin, haddii taasi ay tahay aaladdaada boostada.
Sawirro ku jira macOS Catalina 10.15 waxay muujineysaa dhibaatooyin markii tafatirka sawirada
Sawirrada ku jira macOS Catalina 10.15 waxay muujinayaan dhibaatooyin marka la tafatirkayo sawirada, dhibaato aan ka muuqan aaladaha kale ee Apple.
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS Catalina 10.15.1 hadda waa la heli karaa
Haddii aad tahay horumariye, waxaad horey u haysatay beta-kii ugu horreeyay ee macOS Catalina 10.15.1 oo laga heli karo warar ku filan si loo rakibo.
Sideen ugu soo celiyaa iPhone-kayga macOS Catalina?
Waxaan ku tusineynaa sida ay tahay inaad dib ugu soo celiso ama aad nuqulo gurmad ah uga sameysatid aaladda iPhone ama aaladda macruufka macOS Catalina
Mac ma dhaafsiisna u qaabeynta Mac marka la rakibayo Catalina
Markuu Mac dhammeeyo hawsha rakibaadda macallinka cusub ee 'Catalina macOS' oo uu ku sii jiro hawsha "Dejinta Mac .."
Haa, waad arki kartaa galka alaabta la raray markii la rakibayay macOS Catalina
Ka dib markaad cusbooneysiiso macOS Catalina waxaad arki kartaa galka alaabada Dib loo Dejiyay ee ku yaal desktop-kaaga Mac, tani waa caadi
Adobe wuxuu xaqiijinayaa goor dambe oo ku saabsan cusbooneysiinta macOS Catalina
Isticmaalayaasha isticmaala Adobe Photoshop iyo qalabka Lightroom waxay ku fiican yihiin inay sugaan cusbooneysiin ay ku rakibaan macOS Catalina
Dhibaatooyinka gudbinta barnaamijyada ka yimaada iPad-ka ilaa Mac ayaa dhibsada horumariyeyaasha
Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa in shaqada kuu ogolaaneysa inaad u badasho barnaamijyada iPad-ka ee loo yaqaan 'Mac, Catalyst', ma bixinayaan natiijooyinka dhakhsaha badan ee Apple ay ku xaqiijisay soo bandhigideeda.
MacOS Catalina waxay ku daraysaa shaqada xakamaynta codka ee xuduudaha ku habboon
Ma jeclaan lahayd inaad awood u yeelatid inaad ku xakameyso Mac-gaaga codkaaga? Iyada oo leh MacOS Catalina iyo xakameynta codka cusub hadda waa suurtagal sidii hore.
Awoodda aad kula wadaagi karto galka iCloud ma imaaneyso illaa 2020
Suurtagalnimada in faylal lagu wadaago illaa iCloud, ayaa leh dib u dhac cusub mana la heli doono illaa guga 2020
Ku raaxayso hawsha la ansaxiyay ee Apple Watch ee macOS Catalina
Shaqadu waxay ku ansaxineysaa Apple Watch-ka macOS Catalina waxay na siineysaa xawaare dheeri ah marka aan ku qorno lambarka sirta ee Mac-da
Faylka la tirtiray ee macOS Catalina wuxuu dhibaato ku noqon karaa DJ-yada
Waxay umuuqataa in dadka isticmaala muusikada ama u adeegsanaya inay ka shaqeeyaan iTunes inay ka fogaadaan nooca cusub ee macOS Catalina
Sidecar, waa shaqo kuu oggolaanaysa inaad iPad-ka u isticmaasho shaashad labaad
Sidecar ee macOS Catalina wuxuu noo ogolaanayaa inaan u isticmaalno iPad-ka sidii kiniin garaaf ah iyo xulashooyin kale oo badan
Faylal la wadaagay oo ku jira iCloud Drive isla markaana laga soo ceshay shaashadda macOS Catalina
Nooca cusub ee macOS Catalina wuxuu kusuganyahay geeska waxaana la joogaa waqtigii lala gaari lahaa warka OS-kan cusub
Mac Galiye wuxuu la imaan doonaa macOS Catalina. Muxuu yahay kani?
Mac catalyst wuxuu imaan doonaa nooca cusub ee macOS Catalina. Shaqadani waxay noo oggolaan doontaa inaan ku isticmaalno barnaamijyada iOS-ka barnaamijyadeenna 'Macs'
Apple waxay si rasmi ah u siidaysay macOS Catalina 10.15 maanta!
Apple ayaa hadda soo saartay nooca rasmiga ah ee macOS Catalina dhammaan isticmaaleyaasha. Ha sugin wax intaa ka badan oo ku soo degso nooca cusub sida ugu dhakhsaha badan Mac-kaaga
MacOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS Catalina' waa dhow yahay, kuwani waa Macs is waafajin kara
Tani waa liiska kumbuyuutarrada la jaan qaadi doona macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS Catalina' oo hadda si rasmi ah loo bilaabayo
Logic Pro X ayaa laga yaabaa inuusan si fiican ula shaqeyn MacOS Catalina.
Marabtaa inaad rakibto MacOS Catalina si loo tijaabiyo sida Logic Pro X u shaqeeyo? Waxaad si fiican u sugi laheyd haddii aadan rabin adigoon shaqooyinka aad jeceshahay haysan.
Apple waxay soo saartay macOS Catalina GM oo loogu talagalay soosaarayaasha
Horumariyayaashu waxay horey u hayeen nooca Master Master ee macOS Catalina oo ay haystaan. Kani waa nooca kahor-dhamaadka ah, markaa waan dhownahay
Cusbooneysiinta ama ku rakibida macOS Catalina cusub xoqida?
Waqtigaan, markii si rasmi ah loo bilaabay Mac OS-ga cusub, su'aasha waa lagu celcelinayaa: Cusbooneysii ama ku rakib macOS-ka cusub xoq?
MacOS Catalina beta 10 ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha
Apple wuxuu dhigayaa nooca beta 10 ee macOS Catalina gacmaha kuwa horumariya. Horumarintu waxay umuuqataa inay diiradda saareyso xasilloonida iyo amniga nidaamka
U soo dejiso 7-da darbi ee cusub macOS Catalina
Haddii aad rabto inaad soo dejiso sawirada macOS Catalina, waxaad ku sameyn kartaa xallintooda asalka ah qodobkan.
Haa, Sawirada macOS Catalina waxay lahaan doonaan is-dhexgal la mid ah iOS 13
App-ka cusub ee Sawirada ee macOS Catalina waxaa kujira muuqaal cusub oo cusub. Hada aragida sawiradeena ayaa aad ugafiican
Taariikhda Apple Arcade waxay soo bandhigaysaa macOS macmal ah taariikhda sii deynta
Apple waxay bilaabi kartaa macOS Catalina Jimcaha soo socda, Oktoobar 4, ama xitaa kahor intaan la dhameystirin waxa ay ku soo qoreen degelkooda Danmark
Apple macOS Catalina ma bilaabi doontaa Sebtember 24?
Wargeysyo cusub oo kujira beta-ka 8aad ee macOS Catalina
Wargeysyo cusub oo kujira beta-ka 8-aad ee macOS Catalina, qaab qaab-sare ah. Waxaan sidoo kale ku arki doonaa isku xigxiga sawirada dusha desktop-ka.
Shahaadada barnaamijka cusub ee macOS Catalina ayaa dib loo dhigay illaa Janawari 2020
Apple wuxuu yareynayaa nidaamka nootaayo codsi ee macOS 10.15 Catalina illaa Janaayo 2020
MacOS Catalina beta 6 waxay ku dareysaa astaamo cusub HomeKit
MacOS Catalina beta 6 waxay ku soo bandhigaysaa astaamo cusub HomeKit laambadaha, bareesada iyo taageerayaasha. Codsiga waa ka duwan yahay nooca macruufka ah.
Apple waxay sii deyneysaa macOS Catalina beta 6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysaa macOS Catalina beta 6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Waqtigan xaadirka ah kama helno wararka nidaam aad u deggan.
Muuqaalka Qoraalka Khadka Tooska ah ayaa ka madoobaanaya macOS Catalina betas
Muuqaalka Qeexitaanka qadla'aanta ayaa ka dhammaaday macOS Catalina betas. Khilaafaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan macluumaadka isticmaalaha wuu tirtiri karaa.
Dib u fiiri kaydintaada kahor intaadan rakibin macOS Catalina
Dib u fiiri kaydintaada kahor intaadan rakibin macOS Catalina. Labadaba barnaamijyada iyo fulinta isku mid ah aaladda Time Machine.
Dhibaatooyin badan oo iCloud ah ayaa laga helay macOS Catalina betas
Dhibaatooyin badan oo iCloud ah ayaa laga helay macOS Catalina betas. Dhibaatooyinku waxay saameyn ku yeeshaan isku-dubbaridka faylka iyo wadaagista.
macOS Catalina beta 4 horeyba ugu jirtay gacanta horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysay nooca beta beta ee macOS Catalina ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Waxay ku dareysaa horumarin xagga amniga iyo xasiloonida nidaamka
MacOS tii ugu dambeysay ee Catalina beta waxaa ku jira shaashad cusub
Nooca ugu dambeeya ee macOS Catalina waxaa ku jira shaashad shaashad qurux badan leh oo aan ku qaabeyn karno afar nooc oo kala duwan.
Beta labaad ee dadweynaha ee macOS Catalina iyo tvOS hadda waa la heli karaa
Nooca labaad ee beta beta ee macOS Catalina, tvOS, iyo qeybaha kale ee beta ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo.
Horumariyayaashu waxay horey u heystaan ​​beta 3 ee macOS Catalina 10.15, watchOS 6, tvOS 13 iyo OS kale
Noocyada Beta 3 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha. Markan waxaan ku galeynaa beta 3 ee macOS Catalina 10.15, watchOS 6, tvOS iyo kuwa kale
Adeegga ballaarinta boosaska ayaa soo noqda ka dib markii la joojiyay macOS Catalina
Ka dib markii la bilaabay barnaamijka cusub ee 'Pro Pro', Apple waxay dib u soo celisay adeegyadeedii si loo ballaariyo boosaska kaararka PCI leh beta labaad ee macOS Catalina.
Illaa 8 AMD Radeon Sawirro aan la aqoon oo ka muuqda MacOS Catalina Second Beta
Ilaa 8 AMD Radeon sawiro aan la garaneyn ayaa ka muuqda beta labaad ee macOS Catalina. Xaqiiqdii waxay ka soo muuqan doonaan Macs-ka 2019 iyo 2020
macOS Catalina ma bixiso wax taageero ah maktabado badan oo iTunes ah
Labada betas ee maanta la heli karo ee macOS Catalina, midkoodna nama ogolaanayo inaan galno maktabado kala duwan oo aan ku abuurnay iTunes
Sida loo rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee macOS Catalina 10.15
Waxaan ku tusineynaa sida loogu rakibo macOS Catalina Mac-gaaga si fudud oo dhaqso ah. Xaaladdan oo kale beta 1 ee Apple OS
MacOS Catalina waxaa ku jiri lahaa noocyo loo habeeyay Mashruuca Hiddeyeyaasha ee iMessage iyo Tilmaamaha
MacOS Catalina, farriimaha codsiyada iyo toobiyeyaashu waxay ku imaan doonaan taageerada Mashruuca 'Catalyst', kaas oo noqon doona mid caalami ah oo ay weheliso iPadOS.
Noocyada Sidecar ee iswaafajinaya
Haddii aadan ogeyn haddii Mac-gaagu la jaanqaadi karo shaqada Sidecar, hoosta waxaan ku tusi doonaa dhammaan moodooyinka la jaan qaadi kara shaqadan cusub.
Aspyr wuxuu ku dhawaaqay dhamaadka 32-bit game ee macOS
Aspyr wuxuu xaqiijinayaa dhamaadka 32-bit kulan ee macOS Catalina waana la badali doonaa lana cusbooneysiin doonaa ka hor inta aan si rasmi ah loo bilaabin macOS cusub
Apple waxay sii deyneysaa beta labaad ee macOS Catalina 10.15 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deyneysaa beta-ka labaad ee macOS Catalina 10.15 ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Beta-kani wuxuu nadiifiyaa khaladaadkii ugu horreeyay ee ay ogaadaan horumariyayaashu
Halkan ku soo dejiso sawirada cusub ee macOS Catalina
Kuwani waa saddexda sawir ee cusub ee macOS Catalina. Waad soo dejisan kartaa iyaga oo bilaash ah si aad ugu isticmaasho Mac-gaaga
Sida loo saxeexo dukumiintiyada macOS Catalina
Waxaan ku tusineynaa sida looga saxeexo dukumiintiyada macOS Catalina ee Mac ka mid ah qalabkaaga iOS
Warka ku saabsan codsiga Mail ee la imaan doona macOS Catalina
In kasta oo aysan astaamo badan oo cusub ku jirin Boostada macOS Catalina, qaar iyaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inay kuu oggolaadaan inaad mar kale isticmaasho.
Muuqaalka "Sidecar" ee loo adeegsado iPad-ka sidii shaashad labaad ayaa ku kooban Mac-yadii ugu dambeeyay
Muuqaalka "Sidecar" ee loo adeegsado iPad-ka sidii shaashad labaad ayaa ku xadidan Mac-yadii ugu dambeeyay. IPads-yada taageera iOS 13 waa la taageeri doonaa.
Aasaasayaasha Luna Display ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ka shaqeynta hagaajinta wax soo saarkooda
Muuqaalka cusub ee Sidecar ee macOS wuxuu dhabar jab ku yahay abuurayaasha barnaamijka 'Luna Display', oo sheegaya inay sii wadi doonaan ka shaqeynta wax soo saarkooda.
macOS Catalina waxay ku rakibtaa faylasha faylasha nidaamka qaybta akhriska keliya
macOS Catalina waxay ku rakibeysaa faylasha nidaamka qeyb qeyb-aqrin ah. Sidan ayaa sifiican uga "gaashaamaysa" nidaamka ka dhanka ah weerarada haakaha
Nabadgelyo Dashboard. Apple ayaa ka saareysa macOS Catalina
Nooca cusub ee macOS Catalina ayaa ka dhammaanaya Dashboardka. Noocii ugu horreeyay ee beta wuxuu ka dhammaanayaa shaqadan
Mashruuca Mashruuca, ku isticmaal barnaamijyada iPad-ka 'Mac-kaaga'
Apple waxay ku darsataa Mashruuca 'Catalyst' macOS Catalina, taas oo aan ka badnayn Marzipan caan ka ah. Dhawaan waxaan awoodi doonnaa inaan ku isticmaalno barnaamijyada iPad-ka ee ku jira Mac-ga
Apple waxay sii wadi doontaa inay iibiso muusikada iyo fiidiyowyada inkasta oo iTunes-ka la baabi'inayo.
Apple waxay sii wadi doontaa inay iibiso muusikada iyo fiidiyowyada inkasta oo iTunes-ka la baabi'inayo. Waxyaabaha hadda ku jira iTunes Media ayaa loo guuri doonaa barnaamijyada cusub
Helitaanka iyo Amniga, laba horumar oo muhiim ah macOS Catalina
Apple waxay hagaajineysaa Helitaanka iyo Amniga, oo leh isbeddelo muhiim ah nooca cusub ee macOS Catalina
Kuwani waa Mac la jaan qaadi kara macOS cusub 10.15 Catalina
Waxaan kuu daynaynaa liiska Mac-yada oo dhammaystiran oo la jaan qaadi kara macOS Catalina
Apple ugu dambeyntii waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa macOS 10.15 Catalina
Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay macOS 10.15 Catalina oo ka tirsan WWDC 2019 iyadoo la baabi'iyay iTunes, isdhexgal badan oo lala yeelanayo iOS iyo iPadOS, iyo inbadan.